प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावमा ओझेलमा डोटी तिखाको मालिका – सुदूरखबर डटकम
प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावमा ओझेलमा डोटी तिखाको मालिका
label झलक पाली query_builder October, 04 2019
डोटी, असोज-१७ ।
चारैतिर भिरालो भूभाग । बिच्चैमा अग्लो डाँडा । त्यो हो डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. १ तिखामा रहेको ‘मालिका’ मन्दीर अवस्थित डाँडा । धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि उक्त क्षेत्र प्रचार–प्रसार, संरक्षण, संवर्धन अभावमा ओझेलमा छ ।
तत्कालिन बाइसे–चौबिसे राज्यकालभन्दा पूरानो इतिहास भएको अनुमान गरिएको डाँडाको चुचुरोको बिचमा मालिका मन्दीर रहेको उक्त क्षेत्रमा निकै कलात्मक शैलीमा ठूला–ठूला ढुङ्गाले चारैतिर पर्खाल लगाईएको छ । मन्दिरको छेउमा अन्दाजी २० फिट बढी गहिरो कुण्ड जस्तो छ । जहाँ तत्कालिन समयमा सुसारेहरुले सेती नदिबाट बोकेर पानी जम्मा पार्ने र उक्त पानी राजाका लागी घरायसी रुपमा र घोडाहरुलाई खुवाउन प्रयोग गरिने बुढापाका बताउँछन् ।
उक्त मालिका मन्दीर परिसरबाटै पूर्वी भागदेखि सेती नदिसम्म भित्रभित्रै झण्डै १ हजार ५ सय मिटर जती सुरुङ् मार्गबाट पानी भर्न जाने बाटो रहेको बताईन्छ । जुन परिईसकेका कारण अहिले देख्न भने सकिंदैन ।
डोटीको सदरमुकाम सिलगढीबाट करिब ११ किलोमिटर पीच सडक र ९ किलो मिटर कच्ची सडकको यात्रासँगै झण्डै ४५ मिनेटको पैदल यात्रापछि उक्त ठाउँमा पुग्न सकिन्छ ।
सो क्षेत्रमा राजा कहिले बसोबास गरेका हुन् भन्ने एकिन मिति र कुनै अभिलेख नभए पनि झण्डै २२÷२४ सय वर्ष पूरानो इतिहास हुनसक्ने दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष बहादुर सिंह खड्काले बताए ।
तर सो क्षेत्रमा मालिकाको मन्दिर भने वि.सं. २०५६ सालमा मालिकाको मन्दिर स्थापना गरिएको छ । तथापी उक्त क्षेत्रमा पश्चिमपट्टी पहिले देखि नै पूजा गर्ने क्षेत्र रहेको बताईन्छ ।
हरेक वर्ष असार शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिमा मालिकाको पूजा गरिन्छ । मालिका पूजाका लागि विभिन्न ७ गाउँका पूजारीहरुको जिम्मेवारी रहेको बताईन्छ ।
पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रचारप्रसार, संरक्षण, संवद्र्धनको अभावमा मालिका क्षेत्र ओझेलमा रहेकोमा अब वडाको अगुवाईमा आवश्यक पहल गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने वडा अध्यक्ष खड्काले बताए ।
हाललाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा वडाबाट ५ लाख रुपैंया विनियोजन गरेर आधा बाटोसम्म सडक पुर्याउने र मालिका मन्दिर नजिकै एक सय बढी सिंढी चढ्ने गरी विकास गर्ने वडाको योजना छ । यस लगत्तै डिपिआर तयार गरी पूरातत्व विभागबाट अध्ययन गराई नगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग थप विकासका लागि पहल गर्ने खड्काले बताए ।
उक्त क्षेत्रमा यसै साता मंगलबार मात्रै डोटीमा रहेको शशस्त्र प्रहरी बल ३६ नं. गणका इन्स्पेक्टर केशव अवस्थी नेतृत्वको २५ जनाको टीम र स्थानीय युवाहरुको टिमले सरसफाई गरेका छन् ।
उक्त क्षेत्रमा सडक सुविधा, खानेपानी र बत्तीको व्यवस्था गरी आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने स्थानीय बासिन्दा तयार भएका छन् ।
‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं आन्तरिक पर्यटक नै निकै कम जाने उक्त क्षेत्रको उचित विकास र प्रचारप्रसार गर्न सके बाह्य पर्यटक समेत भित्र्याउन सकिने देखिन्छ ।
गाउँघरमा तिहार लागे पनि सिगास गाउँबासी लाई कामको चटारो
पेनाल्टी सुट आउट फुटवल प्रतियोगिता ९ गते देखि मालाखेतीमा हुदै
सुत्केरी महिलाको बाजुरा प्रहरीद्वारा उद्धार
बैतडीमा ‘द हन्ड्रेड’ नकआउट खसीकप क्रिकेट हुने
‘विप्लव’ समूहका डोटी जिल्ला कमिटी सदस्य छेडाल पक्राउ
बैतडीमा ५ लाख बढीको अवैध सामान बरामद
कांग्रेसबाट परशुराम नगरकार्यपालिका सदस्य महरा नेकपामा प्रवेश
कञ्चनपुरमा भारतीय जंगली हात्तीको आतंक